Milateriga Israa’iil oo weeraray Qaza iyo Suuriya | Xaysimo
Home War Milateriga Israa’iil oo weeraray Qaza iyo Suuriya
Milateriga Israa’iil oo weeraray Qaza iyo Suuriya
Milateriga Israa’iil ayaa sheegay in duqeymo dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen marinka Qaza yo Suuriya ay ku bartilmaameedsadeen kooxo jihaad doon ah.
Weeraradan ayay Israa’iil sheegtay in looga jawaabayay gantaalo lagu soo weeraray dalkeeda gaar ahaan dhanka Koonfureed.
“Waxaanu bartilmaameedsanay saldhigyo ay kooxaha jihaad doonka ah ku leeyihiin Koonfurta caasimadda Dimishiq iyo marinka Qaza,”ayay yirahdeen milatreriga Israa’iil.
Waxaa adag in Israa’iil ay sheegato weeraro ay ka fuliso gudaha dalka Suuriya, waxaana ay sheegeen in milaterigoodu uu bartilmaameedsaday “xarun ay ka hawlgalaan kooxaha jihaad doonka ah” oo ay sheegtay inay ku dhuumaleystaan gudaha Qaza iyo Suuriya.
Haseyeeshee Dowladda Suuriya ayaa sheegtay inay soo ridday inta badan madaafiicdii lagaga soo tuuray dhanka Israa’iil. Saraakiisha caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in afar qof ay ku dhaawacmeen Qaza, isla markaana aysan jirin wax dhimasho ah.
Weeraradan ayaa imaanaya iyadoo maalin ka hor ay Koonfurta Israa’iil kusoo dhaceen madaafiic gaaraya 20 oo laga soo riday marinka Qaza, mana jirto wax khasaara ah oo ka dhashay weeraradaasi.
Xiisadda ayaa bilaabatay maalin kahor, kadib markii Israa’iil ay sheegtay in xadka Qaza ay ku dishay shakhsi ka tirsan kooxaha Islaamiyiinta ee Falastiiniyiinta ah.
Xukuumadda Tel Aviv waxaa kale oo ay sheegtay in ninkaasi uu qaraxyo ku rakibayay dhanka xadka.
Muuqaalo si aad ah loogu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya cagacagaf Israa’iil leedahay oo qaadaysa meydka ninka la dilay, arrintaas oo ka careysiisay dad badan oo Falastiiniyiin ah.
Qaar kamid ah shacabka Falastiiniyiinta ayaa ku baaqay in loo aarguda, saacado kadibna waxaa madaafiic lagu garaacay Israa’iil, taas oo keentay in la weeraro Qaza.
Kooxda Islamic Jihaad ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarka, waxayna ku tilmameen mid looga jawaabayo dilka mid kamid ah oo lagu dilay dhanka xadka.
Islamic Jihad, oo ay taagaeerto Iran, waa mid kamid ah kooxaha ugu adag ee ka dagaalama marinka Qaza, waxayna xulafo la yihiin kooxda kale ee Xamaas, kuwaas oo dagaallo dhowr ah la galay Israa’iil.
Gacan ka hadalka u dhaxeeya Israa’iil iyo kooxdan ayaa soo bilawday bishii Nofembar ee sanadkii hore, xilligaas oo Israa’iil ay duqeyn dhanka cirka ah ku dishay sarkaal sare oo katirsan kooxdaas gacan saarka la leh Iran.
Isku dhaca ciidamada Israa’iil iyo Falastiniyiinta ayaa dhacay horraantii sanadkan, maalma uun kadid markii Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump uu daaha ka rogay qorshihiisa cusub ee nabadda bariga dhexe.